Nepali Christian Song | के त्रिएकत्व छ? | with lyrics | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Nepali Christian Song | के त्रिएकत्व छ? | with lyrics
13 अप्रील 2022
यदि त्रिएकत्व छ भन्छौ भने,
बताऊ “तीन व्यक्तिमा एक परमेश्‍वर” के हो।
पवित्र पिता के हुनुहुन्छ? पुत्र के हुनुहुन्छ?
पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ? के यहोवा पवित्र पिता हुनुहुन्छ?
के येशू पुत्र हुनुहुन्छ? तब पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ?
के पिता आत्मा हुनुहुन्न? के पुत्रको सार आत्मा होइन र?
के येशूको काम पवित्र आत्माको काम होइन र?
के यहोवाको काम येशूको काम जस्तै
आत्माले गर्नुभएको होइन र?
परमेश्‍वरसँग कतिवटा आत्मा हुन सक्छ?
तिम्रो व्याख्या अनुसार, ती तीन व्यक्ति
पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एकै हुन्।
यो सत्य हो भने, त्यहाँ तीन आत्मा छन्,
“तीन आत्मा” भनेको तीन परमेश्‍वर हुनु हो।
मतलब साँचो परमेश्‍वर एक मात्र हुनुहुन्न।
कसरी यस्तो परमेश्‍वरमा उहाँको जन्मजात सार हुन सक्थ्यो?
एकै परमेश्‍वर स्वीकार्छौ भने,
उहाँ पिता हुन, उहाँसँग पुत्र हुन कसरी सक्छ?
के यी तिम्रा धारणा मात्रै होइनन्?
परमेश्‍वर एक मात्र हुनुहुन्छ, परमेश्‍वरमा एक व्यक्ति मात्र,
र परमेश्‍वरका आत्मा मात्र एक हुनुहुन्छ,
बाइबलमा लेखिए झैँ:
“पवित्र आत्मा र परमेश्‍वर एक मात्र हुनुहुन्छ।”
पिता र पुत्र हुनु-नहुनु भएपनि,
परमेश्‍वर मात्र एक हुनुहुन्छ।
तिमीहरूले विश्‍वास गर्ने यी तीनको सार
पवित्र आत्माको सार हो।
परमेश्‍वरः देहधारी हुनसक्नुहुने आत्मा,
मानिसबीच बाँच्नुभई, सबै भन्दा माथि हुन सक्नुहुन्छ।
सर्वव्यापी, सर्व-सम्मिलित हुनुहुन्छ।
देहमा बस्नुभएर पनि ब्रह्माण्डभरि फैलनुहुन्छ।
सबै “परमेश्‍वर मात्र एक साँचो परमेश्‍वर” भन्छन् तब
एक अविभाजित परमेश्‍वर मात्र हुनुहुन्छ!
परमेश्‍वर एक मात्र आत्मा, एक व्यक्ति
र त्यो नै हो परमेश्‍वरका आत्मा।